Ama-FAQ | Wuxi Zuoyou Knitting Izimpahla Co, Ltd.
Ingabe ilogo yenkampani yethu ingaphrintwa kumkhiqizo?
Vele.Imikhiqizo yonke ingenziwa ngokwezifiso futhi iguqulwe.
Sineqembu elizimele lokucwaninga nentuthuko kanye nethimba lokuklama, isitayela somkhiqizo, usayizi, umbala kungenziwa ngezifiso.
Uma unazo ezinye izidingo, singakuncoma noma sithuthukise imikhiqizo yakho.
Ingabe unayo izibuyekezo zomkhiqizo?
Yebo. Ukuvuselelwa komkhiqizo kumenyezelwa ngencwadi yethu yezikhathi ezithile.
Uhlobo luni lokukhokha oluthathayo?
Sithatha izinkokhelo zamakhadi wesikweletu (i-Visa, i-Mastercard, i-Discover, ne-American Express). Sithatha nezinkokhelo ze-PayPal.
Yenziwa kuphi imikhiqizo yakho?
Ingabe imaski enokulahlwa ingamelana ne-coronavirus?
Le maski ingavimba i-coronavirus. E-China, abantu abaningi bagqoka imaski enjalo ukuvikela i-coronavirus. Lolu hlobo lwamaski lungakwazi ukuhlunga umoya ongena ekhaleni nasemlonyeni, luvimbe ngempumelelo ukuhlaselwa kwamagciwane.
Ama-masks wezokwelapha ngokuvamile ahlukaniswa ngamaski we-cotton gauze, imaski yokuhlinzwa yezokwelapha, imaski ye-FFP3 noma i-N95, futhi amazinga abo wokuvikela aqiniswa. Imaski yethu ingeyesigaba sesibili futhi ingafakwa ezibhedlela.
Angiqondi umehluko phakathi kwe-FFP3 ne-N95.
UKn no-N kwimodeli yemaski bamelela amazinga kazwelonke ahlukene.
Imaskhi engu-N95, incwadi uN imele i-American Standard, inombolo 95 iyona banga lokuvikela, kanti ukusebenza ngempumelelo kokufakwayo kwezihlungi zemaski ezinhlwini kufinyelela ku-95%. I- "N" futhi isho ukungahambelani ne-oyela, ikakhulukazi ukuhlunga kwezinhlayiya ezingekho kawoyela, njengothuli, inkungu ye-asidi, inkungu yopende, i-microorganism, njll.
I-Ffp3 imaski, incwadi i-FFP imele indabuko yase-Europe, incwadi u-3 yizinga lokuvikelwa, kanti futhi izinga lokuvikelwa kwe-ffp3 liphakeme.
Angazi noma lezo zinhlobo zemaski ziyalahlwa noma cha.
Amamaski wezokwelapha angasetshenziswa uma nje kungekho ukungcoliswa. Isikhathi esijana, umsebenzi wamamaski uzoncishiswa futhi nomphumela wokuzivikela uzokwehliswa. Esikhathini sanamuhla esikhethekile, uma ungakwazi ukubona ukuthi imaskhi ingcolile, kunconywa ukuthi uyisuse kanye.
IZIWAZI ZONKE I-WHOLESALE
Inqubo yokuba ngumthengisi weWholesale yemikhiqizo yaseZuoyou idinga abathengisi ukuthi bagcwalise Isivumelwano Sentengo Sokukhangisa Sentengo, Umthengisi noma Isivumelwano Sokuthenga Sokuthenga, kanye Nesivumelwano Sokuthenga Ngezikweletu.
Ukwamukela lawa mafomu, sicela uthintane alex.wu@wxzuoyou.com. Ngemuva kokugcwalisa lawa mafomu, thumela la mafomu ku-alex.wu@wxzuoyou.com kanye negama loxhumana naye weZuoyou osebenzelana ne-akhawunti yakho. Uma ungenayo i-Zuoyou rep, sicela ubhale uhlobo lwebhizinisi lakho ukuze sikunikeze lona.
Ngemuva kokuthi wamukelwe i-Wholesale, i-Zuoyou izokuthinta lapho i-akhawunti yakho isethelwa ukuthola amanani entengo kwiwebhusayithi yethu kanye nokufinyelela ekhasini lethu le-Wholesale Resources. Iwebhusayithi yethu isebenza kuphela amakhadi wesikweletu nama-oda wePayPal.
Isihlalo D1, No. 8-2, Xinshi Road, IZindawo Zezimboni, Idolobha laseQianzhou, Idolobha laseWuxi, Isifundazwe saseJiangsu, China
UBANI: Ubhubhane lomqhele omusha womhlaba wonke uyaqhubeka ...
Funda ngokuvimbela ubhubhane, lungisa ...
Ubukeka kahle egqoke imaskhi. Ngabe y ...
Uma udla, kuyingozi kakhulu ukubeka ...
© Copyright 2020 Zuoyou. Wonke Amalungelo Agodliwe.